आर्यघाटबाट पनि लाइभ ? लन्डनमा मुन्द्रेको यस्तो घोचपेच- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
आर्यघाटबाट पनि लाइभ ? लन्डनमा मुन्द्रेको यस्तो घोचपेच
लन्डन — नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढिरहँदा ‘स्टयाण्ड अप कमेडियन जितु नेपाल(मुन्द्रे) पनि यसबाट अछुतो रहेनन् । लाइक, अपडेट अनि कमेन्ट्स । समय समयमा फेसबुक अपडेट्स नियालिरहँदा मानिसहरु खुशीयाली देखि मसानघाटसम्मको लाइभमा अभ्यस्त रहँदा मुन्द्रे आश्चर्य चकित छन् ।
‘हुँदा हुँदा अहिले त लास जलिरहँदा पनि धुरु धुरु रुँदै लाइभ गर्ने चलन बढ्यो,' लन्डनको ग्रीनफोर्ड टाउन हलमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा मुन्द्रे प्रस्तुत भए, ‘खुशीको क्षण त ठीकै हो, वियोगमा समेत लाइभ गरेर मानिसहरुको संवेदना किन हराउँदैछ ?’
सामाजिक सञ्जालको विकृतिमाथि कटाक्ष गरेका यी जनप्रिय हांस्यकलाकारले पारिवारिक विचलन र नेपालको समसामयिक राजनीतिक बेथितीमाथि समेत कडा प्रहार गरे । उनले आसन्न निर्वाचन जोडेर नेताहरुमाथि तीखो व्यंग्य गर्दा दर्शकले साथ दिइरहेका थिए। ‘अहिले चुनाव लागेको बेला त उम्मेदवारहरु खेतमा धान काट्ने देखि उस्तै परे कपाल नै काटिदिन समेत तयार देखिएका छन्’, चुनावका बेला मिठो सपना बांडेर जनता माझ पुग्ने अनि जितेपछि गायब हुने नेताहरु मुन्द्रेको ‘टार्गेट’ भए ।
नेपालका शीर्षस्थ नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, रामचन्द्र पौडेलको क्यारिकेचर गरेर पनि दर्शक हंसाए मुन्द्रेले । आधुनिक जमानामा महिलाहरुको बढ्दो फेसन र मेकअप संस्कृति उनको व्यंग्य मसला बनेको थियो । नेपालको तुलनामा बेलायतका नेपाली महिलाको सु:खसयललाई उनले व्यंग्य मिश्रित प्रशंसा गरे ।
चौंथो पटक बेलायत आएका मुन्द्रले नेपाली टाइम भनेर दुई घण्टापछि हल्लिंदै कार्यक्रममा झुल्किने प्रति पनि छाडेनन् ।
इलिट इन्टरटेनमेन्ट यूकेले बेलायतमा गरिरहेको कार्यक्रममा मुख्य आकर्षण छन् मुन्द्रे । शुक्रबार उनी केन्टवासी नेपाली दर्शक हंसाउंदै थिए । उनी अन्तिम शो अल्डरसटमा गरेर मंगलबार नै नेपाल फर्कने चटारोमा छन् । उनी अभिनित फिल्म छक्का पन्जा २ को ५१ औं दिनको कार्यक्रम भ्याउन छिट्टै नेपाल फर्कनु परेको मुन्द्रेले बताए ।
स्टयाण्ड अप कमेडीमा बेग्लै पहिचान बनाएका जितु अहिले टेलिसिरियल जीरे खुर्सानीमा समेत व्यस्त छन् ।
कार्यक्रममा जितुसंगै नेपाल आइडलका टप ६ सुरज थापा, टप १० केन्जल मेहर श्रेष्ठ र गायिका तृष्णा गुरुङले गायनमार्फत दर्शकलाई मनोरन्जन दिलाए ।
हेम गुरुङ, निरा पिजी, इन्द्र घोताने, मनोज गुरुङ र लाटो मगरले संयुक्त रुपमा नेपाली साँझ ३ गरेका हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०८:३०
गर्दागर्दै खुइ–खुइ : एमालेको बुइ !
बेरोजगार, गरिबी, अशिक्षा, कुसंस्कार, परनिर्भरता र भ्रष्टाचारले आक्रान्त परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा ती कुरा निमिट्यान्न पारिनेछ भनेर ठूलो स्वरले भन्दै जबर्जस्त चलाइएको सशस्त्र आन्दोलन मजाले चल्नु स्वाभाविकै थियो ।
बेरोजगार, गरिबी, अशिक्षा, कुसंस्कार, परनिर्भरता र भ्रष्टाचारले आक्रान्त परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा ती कुरानिमिट्यान्न पारिनेछ भनेर ठूलो स्वरले भन्दै जबर्जस्त चलाइएको सशस्त्र आन्दोलन मजाले चल्नु स्वाभाविकै थियो । अनि माओवादीहरू सत्तामा आएपछि त सुनकै मान्छे होइएला भन्ठान्नु पनि कुनै नौलो कुरो थिएन । अन्तत: १७ हजारको बलिदानी र खर्बौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएपछि कथित् दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ समाप्त भई उक्त आन्दोलनका सञ्चालकहरू सार्वजनिक भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मतदाताले आइन्दा चन्दा दिनु नपरोस्, हातखुट्टा भाँचिमाग्नु नपरोस्, केही गरी मारिनु पनि नपरोस् भन्ठानेर भए पनि माओवादीलाई भोट दिएर जिताए । नभन्दै सत्ता पनि उनीहरूले चलाउन पाए, कहिले आफ्नै नेतृत्वमा, कहिले अरुसँग मिलेर । दोस्रो संविधानसभाको चुनावदेखि स्वात्तै घटेको माओवादी, त्यसपछि उक्सिनै सकेन । तेस्रो पार्टीका रूपमा रहे पनि माओवादी पार्टी, प्रचण्डको चातुर्यका कारण कहिले एमालेसँग र कहिले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा बस्न त पायो, तर जति नै गरे पनि स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा पनि माओवादीको अवस्था सुध्रन सकेन । अन्तत: माओवादी र एमालेको ‘वाम गठबन्धन’ भयो । यी दुई पार्टीको चुनावी साँठगाँठलाई लिएर धेरै थरी टिकाटिप्पणी भइसकेका छन् ।
खासगरी यसलाई लिएर, गर्नेले पनि के–के न ठूलो कामगर्‍यौं भनेर प्रचार गरे भने देख्नेले पनि ‘ज्यादै खतरनाक’ काम भयो भनेर पीर पनि गरे । तर यो पूर्व र पश्चिमका ठगहरूले आ–आफ्ना कमसल सामान साटासाट गरेर मख्ख परेबाहेक कुनै ठूलो कामकुरो थिएन । यसबाट लुँडो खेलमा जस्तो गोटी भर्‍याङनेर पुगेपछि फुत्तै माथि उक्लेजस्तो माओवादी उक्लने पनि होइन । अनि एमालेलाई पनि यसले कुनै फरक पार्ने सम्भावना छैन । खालि कुनै उपाय नलागेर खुइ–खुइ गर्दागर्दै आखिरमाआफ्नो अस्तित्व केही हदसम्म जोगाउँm भन्ने उद्देश्यले मात्रै माओवादी एमालेको बुइँ चढेको देखिन्छ ।– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ